Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 04/12/2019)
Europe Izikhangibavakashi ngo-Ephreli kusho Europe Izikhangibavakashi Phakathi The Spring Isikhathi! Since most of Europe is so far from the equator, iningi abadumile amadolobha namanje kancane kubanda ngo-Ephreli (Pakisha ngokufanele). namanje, Europe Izikhangibavakashi ngo-Ephreli kungaba omunye izinyanga best konyaka ukuvakashela esimatasa futhi Emadolobheni amaningi athandwayo lapha. Amazinga okushisa zifudumala anele kujabulise indawo, kodwa osayizi isixuku mancane kakhulu kunalawo uzobona kusukela ngo noJuni. Nasi uhlu lwethu izindawo ukuvakashela ku-Europe ikhambo lakho ngesikhathi entwasahlobo isikhathi!
Lesi sithombe sathathwa ngo-Europe Izikhangibavakashi Phakathi The Spring, isithombe obunokuthula inala nasemizaneni ajulile blue ikhangele elaliphansi kwamagquma Alps, lapho iqhwa eneziqongo iphakama yakha ezihleleke obuvelele enchanting Borromeo Islands; iyakhohlisa Como, lapho izintaba eziphonsa emanzini alutwa futhi olunothile nemizana ninamathele kwemithambeka. Lezi zinhlobo izigcawu bawuhlobo usinga nokubhala izinkondlo noma angesabi phinda ibe phansi inja isikhundla. Kumane ngakho ngokumangalisayo obunokuthula!
Vakashela esifundeni ngo-Ephreli, Spring njengengxenye Insight Guides Enchanting Italian Lakes uhambo to stay ahead of the crowds.
Gubha ekuqaleni Spring bese ngigibela Isitimela Barcelona. Ngeke kuthathe kakhulu ukuthandana kuleli dolobha Spanish nabantu Spanish, abakhumbula njalo ukuze uphumule futhi zithathe isithongwana nsuku zonke – isihlwathi esheshayo emva kwasemini isikhathi, ngenkathi sizipholele mhlophe amabhishi, yokudla paella okumnandi, futhi ukuphuza sangria fresh.
Ukuqamba amanga endaweni Catalonia, ngqo Ambulas ogwini lwaseMedithera Spain, Barcelona idolobha lesibili ngobukhulu e Spain, futhi omunye edume kakhulu izindawo ukuba izihambi Europe Izikhangibavakashi Phakathi The Spring. Barcelona kuyinto crossover ezithakazelisayo emangalisayo ubudala amagugu yezakhiwo kanye design zanamuhla. Uma umlandeli omkhulu we Gaudi izakhiwo, woza lapha ukubuka yiziphazamiso ezihehayo Sagrada Familia, Casa Batllo, futhi Güell Park. Barcelona ngokuvamile kulungele unyaka wonke, futhi ungavakashela lesi izivakashi friendly idolobha ngasiphi isikhathi sonyaka.
Ungase wazi ukuthi Bruges, Belgium, uphinyiswa “broozh,” kodwa abaningi, futhi amaqhawe “Ngo Bruges” movie, Ngokuqinisekile ngeke. Ziyakwazi Dublin hit amadoda, wamthumela khona umphathi wabo amasonto amabili ngemuva hit kungahambi kahle kakhulu. One hothead abasha ukuthi ubani obona singekho isizathu sokuba umuntu kuphi kodwa Dublin; omunye, amadala, amnene, ukwazi kabanzi, othenga yesiqondiso futhi ememezela: “Bruges iyona engcono kwalondolozwa idolobha medieval ku Belgium!”
Ngakho-ke ngokuqinisekile sibonakala. Uma i-movie angenzanga lutho okunye, ke eziphefumulelwe eziningi isifiso esiphuthumayo ukuvakashela Bruges.
esetshenziswa esiyindilinga amabili ukuze athole elilodwa ekhethekile unyaka! Ukuqamba amanga phakathi eFrance naseSpain, idolobha elincane ezaziwa kahle elinamandla kathi kwale mizi emibili ukuletha, eyaphumela elidumile ubhiya futhi ushokoledi. Kanye Paris, ePrague, futhi Budapest, lokhu ingenye kakhulu romantic amadolobha e-Europe egcwele yeNayile nazo izindlu ezindala medieval.
Lokhu 2,000 idolobha nonyaka owodwa ubudala itholakala entshonalanga Germany futhi esifundeni main ihabhu kwamasiko. Nge ababhishobhi ephakathi obumangalisayo ukubukwa emfuleni, Cologne kuyinto nenkanuko uyakufanelekela uya khona. Ikakhulukazi labo abafuna ukugxuma ungene isiko elisha futhi nakho indlela entsha yokuphila ngenkathi e-Europe. Donot ukhohlwe ikhamera yakho! Cologne lingumuzi nomqondo ovulekile. Kuyinto mhlawumbe hhayi njengoba enhle ngesikhathi look lokuqala nje namanye amadolobha amakhulu, kodwa uma uhamba, uzobona ukuthi elinye lamadolobha amahle kakhulu e-Germany nakanjani kuhla lwethu Europe Izikhangibavakashi Phakathi The Spring.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi) Germany